Sawirro : Xukunkii Mugabe ee muddada dheer - BBC News Somali
Image caption Robert Gabriel Mugabe waxa uu waxbarashadiisa ku qaatay iskuul kaniisad leedahay, kadibna waxa uu u tabobartay macalinimo, isaga oo ka qalinjabiyay jaamacadda Fort Hare (Koonfur Afrika), oo ahayd jaamacaddii Nelson Mandela uu wax ku bartay. 1958 ayuu aaday in uu ka shaqeeyo Ghana
Image caption Waxa ay kulmeen xaaskiisii koowaad Sally Hafron oo ay is guursadeen 1961.
Image caption Markii xabsiga laga soo siidaayay 1974, waxa uu noqday hoggaamiye caan ah oo jabhad ah dagaalkii lagula jiray xukunka caddaanka tirada yar isaga iyo halgamaagii Joshua Nkomo (Midig)
Image caption Waxay aqbaleen in ay hubka dhigaan, kadibna waxa ay ku guuleysteen doorashadii dhacday 1980-kii.
Image caption Robert Mugabe ayaa Zimbabwe ku laabtay lix todobaad uun ka hor doorashii kadib 10 sano oo musaafuris ku maqnaa, kadib waxa uu noqday Ra'isulwasaare dowlad wadaag ah.
Image caption Madaxweynihii Cuba Fidel Castro (dhexda) oo ay wada qoslayaan madaxweynihii hore ee Zimbabwe Canaan Banana (Midig) iyo Ra'isulwasaarihii Zimbabwe Robert Mugabe (Bidix) kadib booqashadii uu ku tagay Harare 31 August 1986
Image caption Mugabe waxa uu xiriir dhow la lahaa Ra'isulwasaarihii Britain Margaret Thatcher
Image caption Mugaben ayaa guursaday Grace Marufu, sanadkii 1996 sanado kadib markii ay geeriyootay xaaskiisii koowaad. Waxa ay isu hayaan labo wiil.
Image caption Kadib markii dowladdii Tony Blair ee UK ay diiday in ay maalgaliso siyaasaddii dhulka ee muranka badan dhalisay 1997-dii, iyo markii uu ku guuldaraystay aftidii la qaaday 3 sano kadib , maleeshiyaad Mugabe taabacsan ayaa weeraray lana wareegay beerihii caddaanka
Image caption Mugabe ayaa badalay labiskiisii, wuxuuna bilaabay in uu xirto dhar lagu xardhay calanka dalkaas
Image caption Sanad kasta xisbiga Zanu-PF ayaa xaflad dhalasho u dhigi jirey Mugabe, waxayna noqotay wax caado ah
Image caption Waa toorte weyn oo lagu xusayo sanad guuradiisa dhalasho ee 92 jirka markii uu noqday, 2016-kii.
Image caption Waraaqo muujinaya sawirka Mugabe xili lagu jirey ololaha doorashada sanadkii 2008-dii, balse lagu kor xardhay magaca xisbiga mucaaradka
Image caption Gabadha kaliya ee uu dhalay Bona Mugabe oo qalin jabinaysa 16-kii November, 2015-kii, dalka Singapore.
Image caption Mudaaharaadayaal kasoo horjeeda Mugabe
Image caption Ciidammada Zimbabwe markasta waa ay barbar taagnaayeen Mugabe, halkan waa dabaaldega sanadguuradii 28-aad ee xornimada Zimbabwe Bishii April, 16, 2008.
Image caption Mugabe oo ku sugan xaflad qalinjabin ah November, 2017-ka maalmo kadib markii ciidanka awoodda la wareegeen.
Image caption Mugabe ayaa is casilay kadib mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo, iyo culees badan oo la saaray.